INDIA 15 - Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको निमन्त्रणामा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले छिटै नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन् । रक्षामन्त्री पोखरेललाई विहिबार उहाँको कार्यकक्षमा नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले शिष्टाचार भेट गरी सो जानकारी दिएका हुन् ।
भेटवार्ताको क्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आफूले गत हप्ता भारतका रक्षामन्त्री सिंहलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता पठाएको स्मरण गर्र्दै भारतका रक्षामन्त्रीबाट नेपालको भ्रमण हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । भारतका रक्षामन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको लागि पठाइएको निमन्त्रणाका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्दै राजदूत क्वात्राले भारतका रक्षामन्त्रीबाट यथाशीघ्र नेपाल भ्रमण हुने व्यवस्था मिलाउन आफूले आवश्यक पहल गर्ने जनाएको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारले जानकारी दिए ।
शिष्टाचार भेटको प्रारम्भमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपाल र भारतबीचको सदियौँ पुरानो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै दुई देशबीच सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक र जनस्तरमा समेत अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको बताए । उनले दुई मुलुकबीच रहेको बहुआयमिक सम्बन्धलाई समयको परिवर्तनसँगै थप परिमार्जन गरी सुदृढ बनाउँदै जानुपर्ने खाँचो रहेकामा जोड दिए ।
नेपाल र भारतका सेनाबीच अत्यन्त असल र सहयोगात्मक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा भारत सरकारले पु¥याउँदै आएको सहयोगका लागि आभार व्यक्त गरे । राजदूत क्वात्राले नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध सरकार–सरकारबीचमा मात्र नभएर जनस्तरसम्म समेत अत्यन्त सुदृढ रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो कार्यकालमा दुई देशबीचको सुमधुर, मैत्रीपूर्ण र पारस्परिक सहयोगात्मक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सक्दो पहल गर्ने बताए । —रासस
पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले संझिए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाइ पठाएको पत्र
भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले नेपालको पछिल्लो प्रजातान्त्रिक संघर्षका क्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाइ तात्कालिन राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सघाउन पठाएको अनुरोध पत्र स्मरण गरेका छन् । नयाँ दिल्ली भारतीय अन्तराष्ट्रिय केन्द्रमा आयोजना गरिएको एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको साझा मन्चमा भारतकालागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यसँग सिंहले सो पत्र स्मरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा राजदूत आचार्यले सिंहलाइ सम्बोधित गर्दै बहुदलीय प्रजातन्त्र पूर्नवहालीकोे नेपाल र नेपालीको तात्कालिन एजेन्डा पुरा भएको कालखण्डको स्मरण गराउँदै त्यसमा सिंहको गुडविल सहयोग रहेको प्रसंग निकालेका थिए । कार्यक्रमको समापनमा राजदूत आचार्य र पूर्व राजदूत पुरीद्धारा संयुक्त रुपमा मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्ने क्रममा सिंहले पूर्व राजा शाहलाइ पठाएको सो पत्रबारे कुरा गरेका थिए । ‘पूरानो समय अनुरुप राजनीति चल्दैन भन्ने सुझाव सहित आफूले पूर्व राजा शाहलाइ लेखेको पत्र उहाँले स्मरण गर्नुभयो, राजदूत आचार्यले नेपइनबिजसँग भने ।
नेपालकालागि पूर्व भारतीय राजदूत मन्जीवसिंह पुरीको पहलमा भारतीय दूतावास काठमाडौद्धारा प्रकाशित ‘नेपालमा शिख विरासत’(शिख हेरिटेज इन नेपाल) पुस्तक समीक्षात्मक कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री सिंहले विशेष अतिथि तथा राजदूत आचार्यले प्यानलिस्टको रुपमा मन्च साझा गरेका थिए ।
दिल्लीले पूर्व राजा शाहलाइ पठाएको पत्रको पृष्ठभुमि
२००० जुनमा भएको नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डपछि राजसंस्थाका कान्छा उत्तराधिकारी बनेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सन् २००५ फेब्रुअरी १मा दोश्रो पटक जननिर्वाचित सरकारका तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाइ माओवादी विद्रोहको समाधान निकाल्न नसकेको भन्दै सत्ता च्यूत गरेर कु गरेका थिए । उनले मुलुकमा आपातकालको घोषणा गरेपछि पून एकपटक प्रजातान्त्रिक संघर्ष शुरु भएको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको अवधारणा चलिरहेको मुलुक त्यसपछि गणतन्त्रको मुडमा अघि बढयो ।
राजतन्त्रको तानाशाहीको प्रत्युत्तरमा सशस्त्र जनयुद्धमा रहेका तात्कालिन नेकपा माओवादीलाइ मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनकालागि सात राजनीतिक दलका गठबन्धनले सन् २००५ नोभेम्बर २२ मा नयाँ दिल्लीमा बाह्र बुँदे संझौता गरयो । बुलेटबाट ब्यालेटको राजनीतिमा माओवादीको प्रवेशपछि मुलुकमा राजतन्त्र विरुद्ध संघर्ष व्यापक हुँदै गयो । यो संर्घले जनआन्दोलनको रुप लियो । विथोलिएको सो राजनीतिक अवस्थाप्रति त्यतिबेला भारत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतको गहिरो चासो रहेको थियो ।
सोही क्रममा दिल्लीले यो राजनीतिक गतिरोध अन्त्यकालागि तात्कालिन राज्य सभा सदस्य तथा भारतीय काँग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. करण सिंहलाइ विशेष दूत बनाएर काठमाडौं पठाएको थियो ।
रााणाकालिन शासनकालका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शमसेरकी छोरी यशोराज्य लक्ष्मीसँग विवाह गरेका कारण करण सिंहको नेपालको तात्कालिन राजपरिवारसँग निकट ,घनिष्ट र विशेष सम्बन्ध रहेको थियो जसका कारण सिंहलाइ विशेष दूत बनाएर पठाइएको थियो । उनले त्यतिबेला पहिले नेपाली राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाइ भेटेर पूर्व राजा शाह भेटे पछि पून राजनैतिक दललाइ भेटेका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहको सन्देश बोकेर आएका सिंहले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यकालागि तत्काल आफ्ना अडानलाइ थाति राख्न अनुरोध गरिएको आशयको अनुरोध पत्र ल्याएको समाचार बाहिरियो । सो पत्रको आशय राजनीतिक दलहरुसँग तत्काल सहमति गरेमा कालान्तरमा संवैधानिक राजतन्त्रलाइ निरन्तरता दिन भारतले सघाउने आश्वासन दिएको पनि उल्लेख रहेको भनिएको थियो ।
हाल राजावादीहरुले भारतले नेपाललाइ धोका दिएको जुन कुरा दोहरयाइरहेका छन् । सोही पत्रलाइ आधार मानेर गरिएको भन्ने एकथरिको विश्लेषण रहेको छ । बाह्रबुँदे शान्ति संझौतापछि पूर्व राजा शाहसँग भारतले गरेको वचनवद्धता भंग गरेको गुनासो राजावादीहरुले गर्दै आएका छन् ।
जापानबाट उद्धार गरेर नयाँ दिल्ली ल्याइएकी नेपाली महिला सकुशल
भारत सरकारले जापानको राजधानी टोकियोको कोरोना संक्रमित डायमण्ड प्रिन्सेज नामक पानी जहाजबाट उद्धार गरेर नयाँ दिल्ली ल्याएको नेपाली महिला सकुशल रहेकी छन् । काठमाडौंको कपन निवासी यी नेपाली महिलाको नाम अम्बिका वस्नेत हो ।
नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासको जानकारी अनुसार वस्नेत सुरक्षित रहेकी छन् । दिल्लीको मानेसर स्थित भारतीय सेनाको सुविधा केन्द्र स्थित क्याम्पमा अन्य नागरिकहरुसँगै चेकजाँचकालागि राखिएकी वस्नेतसँग दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले कुराकानी गरेर उनी सकुशल रहेको जानकारी दिएका छन् । ओडारीले नेपइनबिजसंग भने,‘मैले आफैले कुरा गरेर उहाँको अवस्था बारे जानकारी लिएको हुँ । उहाँ सकुशल हुनुहुन्छ । उहाँले एकदम ठीक छु भन्नुभएको छ । ’
प्रवक्ता ओडारीले काठमाडौं स्थित वस्नेतका आफन्तजनलाइ समेत उनको अवस्था बारे जानकारी गराएको बताए । वस्नेत डायमण्ड प्रिन्सेज क्रुजमा कार्यरत थिइन ।
भारत सरकारले भारतीय वायुसेवाको विशेष विमानबाट ११४ आफ्ना नागरिक सहित पाँच विदेशी नागरिक समेत ११९ जनाको उद्धार गरेको थियो । उद्धार गरिएका नागरिकहरुलाइ विहिबार नयाँ दिल्ली ल्याइएको हो । उनीहरुको उद्धारमा ६ जना जहाज क्रु सदस्य सहभागी थिए ।
भारत सरकारको हेल्थ प्रोटोकल अनुरुप उद्धार गरिएका सबै नागरिकहरुलाइ१४ दिनको चेकजाँचकालागि राखिएको छ । दैनिक रुपमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले उनीहरुको जाँच गर्नेछन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयको जानकारी अनुसार संक्रमण नदेखिएका नागरिकहरुलाइ निर्धारित समयको जाँचपछि घर जान अनुमति दिइनेछ ।
संक्रमण देखिएका नागरिकहरुलाइ उपचारकालागि सफदरगंज अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा पठाइनेछ । उनीहरुको मनोरन्जनकालागि सम्पूर्ण व्यवस्था क्याम्पमै गरिएको तथा एक आपसमा तथा बाह्य क्याम्पका व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीस कुमारले भारतको छिमेकी पहिलो नीति तथा अन्य मुलुकहरुसँगको मित्रवत सम्बन्धका कारण विदेशी नागरिकको उद्धारलाइ समेत प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
उनले विहिबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरा बताउँदै विश्वको जुनसुकै मुलुकमा भारतीय समुदाय संकटमा रहेका बेला उनीहरुलाइ तत्काल स्वदेश फिर्ता ल्याउन भारत सरकारको विदेश मन्त्रालय तत्पर रहेको जानकारी गराए ।
२५ फरबरी २०२०
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महात्मा गान्धीको दृष्टीकोणमा अमेरिका सशक्त रुपमा उभिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भारत भ्रमणमा रहेका ट्रम्पले मङ्गलबार गान्धीको समाथीस्थल राजघाटमा पुगेर गान्धीप्रति श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दै गान्धीको दृष्टीकोणप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
समाथीस्थलमा राखिएको आगन्तुक पुस्तिकामा उनले लेखेका छ्न,‘स्वायत्त र स्वतन्त्र भारतका लागि महात्मा गान्धीले खेल्नु भएको भूमिका र महात्मा गान्धीका अन्य दृष्टिकोणप्रति अमेरिकी जनता सशक्त रुपमा उभिन्छन, यही नै तपाईप्रति श्रद्धा सुमन छ ।”
महात्मा गान्धीलाई श्रद्धान्जली दिन अमेरिकी प्रथम महिला तथा ट्रम्पपत्नी मेलानीया ट्रम्प पनि राजघाट पुगेकी थिइन । उनीहरुले एक मिनेट मौन धारण गरेका थिए । सो अवसरमा ट्रम्प दम्पतीलाइ केन्द्रीय मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले महात्मा गान्धीको अर्धकदको प्रतिमा उपहार स्वरुप प्रदान गरेका थिए ।
राजघाटमा राष्ट्रपति ट्रम्प दम्पत्तिले बृक्षरोपण समेत गरेका थिए । दुइ दिने भ्रमणका क्रममा सोमबार भारत आएका ट्रम्पको टोली भ्रमणको पहिलो दिन गुजरातमा बनाइएको संसारकै सबैभन्दा ठूलो दाबी गरिएको मोटेरा क्रिकेट रंगशाला र प्रेमको प्रतीक मानिने ताज महल पुगेका थिए । रंगशालामा नमस्ते ट्रम्प नाम दिइएको भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । जहाँ दुवै नेताले सम्बोधन गरेका थिए ।
आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बर्ष भारत भ्रमणमा आएका ट्रम्प मङ्लबार राती स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । ट्रम्पको यो पहिला भारत भ्रमण हो । ट्रम्पको भारत भ्रमणले भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञहरुले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
ट्रम्पको भारत भ्रमणले अमेरिकीहरुमा चासो, गुगलमा भारतको व्यापक खोजी
आफ्ना राष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा आएका बेला अमेरिकीहरुले सो गन्तव्यको व्यापक खोजी गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पत्नी मेलिनियाकासाथ सोमबारदेखि दुइ दिने भारत भ्रमणमा रहेका बेला अमेरिकीहरुबीच भारतको खोजी शुरु भएको छ । अमेरिकीहरुले गुगलमा के हो भारत, नमस्ते र कहाँ छ ताजमहल? को व्यापक खोजी गरेका छ्न् ।
पहिलो पटक भारत आएका ट्रम्पको गन्तव्य मुलुकबारे अमेरिकीहरुले गुगलमा व्यापक खोजी गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा नागरिकहरुले गुगलमा के हो भारत? वाक्य राखेर खोजी गरेका छन् । सोमबार यो वाक्य ट्रेन्डमा रहेको थियो ।
यसका अलाबा ट्रम्पको स्वागतमा अहमदाबादको मोटेरा स्टेडियमा ट्रम्पको सम्मानमा दिइएको नमस्ते ट्रम्पको नाराले अमेरिकीहरुमा नमस्ते शब्दप्रतिको चासो बढाएको छ । उनीहरुले गुगलमा नमस्ते शब्दको पनि खोजी गरेका छन् ।
अमेरिकामा २४ फरबरी अर्थात ट्रम्प भारत पुगेको पहिलो दिन के हो भारत? र कहाँ छ भारत? वाक्य ट्रेन्डमा रहेको थियो । त्यसैगरि दोश्रो दिन पनि भारत बारे अमेरिकीहरुले जानकारी खोजिरहेको देखिएको छ । उनीहरुले भारतको नक्शा, भारतको जनसंख्या , ताजमहल कहाँ छ ? भारतको राजधानी जस्ता विषय ट्रेन्डमा रहयो ।
अमेरिकाको न्यू जर्सी, इन्डियाना,जार्जिया र कोलम्बिया राज्यहरुमा यो विषयमा सबैभन्दा धेरै खोजी गरिएको हो ।
२४ फरबरी २०२०
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफनो पहिलो भारत भ्रमणको क्रममा पहिलो चरणको निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सोमबार अहमदाबाद पुगे । पत्नी मेलिनियाकासाथ राष्ट्रपति ट्रम्प एयर फोर्स वन विमान आएका छन् । ट्रम्प दम्पती अहमदाबादको सरदार बल्लभ भाई पटेल विमानस्थलमा बिहान ११ बजेर ३७ मिनेटमा उत्रिएका थिए ।
ट्रम्पको स्वागतकालागि प्रोटोकल तोडेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफै विमानस्थल पुगेका थिए । मोदीले ट्रम्पलाइ अंगालो हालेर नै स्वागत गरेका थिए । मोदीले ट्रम्प भारत पुग्नुअघि नै ट्वििट गर्दै लेखेका थिए , ‘हिन्दुस्तान तपाई भारत पुग्ने पर्खाइमा छ ।’
विमानस्थलबाट उनीहरु साबरमती आश्रम सम्म रोड सो गर्दै पुगेका थिए । आश्रममा ट्रम्प मोदीले महात्मा गान्धीको प्रतिमामा माल्यापर्ण गरेका थिए ।
ट्रम्प मेलेनियाले आश्रममा राखिएको चर्खा पनि चलाएका थिए । ट्रम्पले साबरमती आश्रमको आगन्तुक पुस्तिकामा सन्देश लेखेका छन् । सन्देशमा उत्तर भारत यात्राकोलागि महान मित्र प्रधानमन्त्री मोदीलाइ धन्यबाद दिएका छन् ।
उनको सन्देश अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओवामाले पनि सन् २०१०मा भारत यात्राको दौरान साबरमती आश्रम पुगेका थिए । गान्धीजीको जीवनमा जोडिएको खास स्थानको अवलोकन गर्ने सौभाग्य पाएर म आशा र प्रेरणाले भरिएको छु । उहाँ भारतका मात्र नभएर विश्वकै हिरो हुनुहुन्छ,’ उनले आफ्नो सन्देशमा लेखेका थिए ।
आगन्तुक पुस्तिकामा ट्रम्पले महात्मा गान्धीको बारेका एउटा शब्द पनि उल्लेख नगरेको भन्दै भारतीय संचारमाध्यमहरुले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।